Phuket Zoo ~ Journey-Assist - Fintonana Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Phuket Zoo
Ny fijerena ny Zoo Phuket. Vidin-javatra.
Zoo amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary amin'ilay zoo
Phuket Zoo Review (Google reviews)
Hevitra momba an'i Phuket Zoo (Tripadvisor.com)
Na dia misy Phuket Zoo aza fitarainana maro avy amin'ireo mpitsidika manitaitra fa very tanteraka izy tato anatin'ny taona vitsivitsynefa mbola mendrika hotsarovana ihany izy. Angamba tsy mendrika ny fitsidihana.
Ny mampiavaka ny Phuket Zoo dia ny hoe mitokana samirery. Tsy mamatsy vola ny governemanta any an-toerana izany. Amin'ny lafiny iray, kalitao avo lenta izany, amin'ny lafiny iray, lafo ny fidirana ao aminy, toy ny an'ny zoo.
Biby isan-karazany mahavariana no miaina eto, eo amin'izy ireo, ny voay 5, ny karazana vorona 000 eo ho eo, karazan-lolo lolo 60.
Eo amin'ny zoo koa dia misy ny aquarium sy zaridaina misy orkide. Rehefa mitsidika ilay Zoo Phuket ianao dia afaka mahita fampisehoana isan-karazany miaraka amin'ny biby: Monkey Show, Crocodile Show, Elephant Show.
Phuket Zoo Show
Indrindra indrindra, ny gidro mampiseho ny fahaizany amin'ny bisikileta, manao sary, milalao basikety. Mandeha dihy ny elefanta, milalao baolina, manao sary ary mampiseho fihetsiketsika. Afaka mitaingina elefanta koa. Nandritra ny seho miaraka amin'ny voay, ny mpampiofana dia mametraka ireo tanana ireo ao am-bava amin'ireto repobily ireto, ary atao izany mba tsy natahotra ny mpihaino, fa mampihomehy.
Raha toa ka tsy mikaroka ireo lesoka ao amin'ny zoo ianao, fa mba hanao izay noforonina ireo zona, dia afaka mandany fotoana mahafinaritra ianao.
Ny fomba fandidiana ny zoo ao Phuket. Asehoy ny fandaharam-potoana
Manokatra fito andro isan-kerinandro ny Zoo manomboka amin'ny 8:30 ka hatramin'ny 18.
Ny fampisehoana monkey dia natao 9, 12, 14:30 ary 16:45.
Fampisehoana voay - amin'ny 09:45, 12:45, 15:15, 17:30.
Fampisehoana elefanta - amin'ny 10:30, 13:30 sy 16.
Natao ny zava-drehetra ka nahafahan'ny mpitsidika nanatrika ny fampisehoana telo rehetra tamin'ny andro iray ihany.
Vidin'ny fitsidihan'ny zoo
Tapakila olon-dehibe 500 baht
Tapakila ho an'ny ankizy iray - 300 Baht.
Raha atao sary manokana dia mila mandoa vola ianao raha te sary miaraka amin'ny biby eo amin'ny toerana akaiky. Miaraka amin'ny elefanta iray, ohatra.
Tsy misy ny tokony andoavana manokana amin'ny fitsidihana ireo fampisehoana rehetra, izy ireo dia tafiditra ao amin'ny vidin'ny tapakila.
Ny zoo dia ao amin'ny avaratry Phuket. Afaka mandeha amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka na fiara / bisikileta fotsiny ianao. Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka.
Azonao atao ihany koa ny miditra amin'io zoo io raha anisan'ireo fitsangatsanganana manokana avy amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany.
Fifandraisana ao amin'ny zoo
Address: 23 Soi Pa Lai 2, Chalong, Distrikan'i Mueang Phuket, Phuket 83130, Thailandy
telefaonina + 66 76 374 424
Tranonkala ofisialy http: //www.phuketzoo.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/fXbFh8qhQ6xFW8h39
Phuket Zoo ao amin'ny sarintany
Phuket Zoo Sary sy horonan-tsary
Hevitra momba an'i Phuket Zoo (famerenana Google)
Raha ny marina dia tsy vao haingana ny fanadihadian'ny zoo amin'ny zoo, ary miangatra amin'ny lafiny maro. Tena mihena ny zoo tao anatin'izay taona lasa izay.
Fa amin'ny ankapobeny, raha ny tanjona dia ny hahita ireo biby miaraka amin'ilay zaza ihany, dia tsy ratsy ity vala zoo ity.
Reply to tantara
Ekeko. Tsy misy kintana avy any an-danitra ny zoo, ary miharihary mazava kokoa noho ny zoo lehibe ao Bangkok. Ary mazava ho avo be ny vidin'ny fidirana. Saingy, tsy misy fomba hafa hijerena fampisehoana samihafa, lolo, vorona ary biby maro be voaangona manerana an'izao tontolo izao ao Phuket.